Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-achọpụta ihe kpatara na ọgwụgwọ nke mkpirisi ọbara metụtara COVID-19
Fluxion Biosciences kwuputara na ejiri sistemu BioFlux ya mee nyocha na COVID-19 yana ikike ya iduga n'ọkwa dị elu nke coagulation platelet yana ihe egwu dị ukwuu nke thrombosis. Ọmụmụ ihe mbụ, nke otu ndị otu na Mahadum Pennsylvania bipụtara, ka ewepụtara na Mee 2021 dị ka ndebiri na bioRxiv, ma akpọrọ ya "Ịbanye site na FcgRIIA na ụzọ C5a-C5aR na-emezi hyperactivation platelet na COVID-19". Mbipụta nke abụọ, nke otu ndị otu na Hospitallọ Ọgwụ Mahadum Tuebingen na Ọganihu Ọbara bipụtara na Jenụwarị 10, 2022, akpọrọ “Mmebi nke cAMP na-egbochi nrụpụta thrombus na-egbochi mmadụ na COVID-19.”
N'agbanyeghị na ọ bụ ọrịa iku ume, COVID-19 egosila na ọ na-ebute nzaghachi dị iche iche, gụnyere mmetụta ọjọọ na sistemu obi. Ụfọdụ ndị ọrịa gosipụtara nzaghachi mkpali nke nwere ike ịkpalite thrombosis, na enwere nnukwu ọnọdụ maka ndị nwere ọrịa siri ike.
N'akwụkwọ nke mbụ, ndị nchọpụta na Mahadum Pennsylvania chọpụtara ndị isi mgbasa ozi nke mbufụt na ọrịa obi na ndị ọrịa COVID-19 jikọtara nke ọma na ịgbalite platelet na sistemụ BioFlux. Ndị otu ahụ gosikwara na Syk inhibitor fostamatinib tụgharịrị hyperactivity platelet na nnwale BioFlux. Ndị nchọpụta ahụ kwubiri na nke a na-anọchi anya ụzọ dị iche iche, nke a na-atụ anya iji gbanwee mmetụta a.
N'akwụkwọ nke abụọ, ndị nyocha nke Mahadum Tuebingen gosipụtara na mbelata ogo CAMP (cyclic adenosine monophosphate) na platelet na-eme ka mgbochi platelet na-ebute mgbochi na ịmepụta thrombus. Iloprost gbochiri mmetụta ndị a, onye na-ahụ maka ọgwụgwọ ụlọ ọgwụ kwadoro nke na-abawanye ọkwa cAMP intracellular na platelet.
Akwụkwọ abụọ a dabere na sistemụ BioFlux iji nyochaa ọrụ platelet na ndị ọrịa COVID-19. Sistemụ BioFlux na-arụ ọrụ dị ka “mgbawa na mgbawa” nke na-achịkwa sel micro-environment ka ọ na-eṅomi ọnọdụ n'ime ahụ mmadụ, na-enye usoro dị mma maka nyocha ọrụ ọbara metụtara COVID-19. Ejiri ihe karịrị ụlọ nyocha 500 n'ụwa niile, usoro BioFlux dị n'ụdị nhazi dị iche iche iji mezuo ihe achọrọ ngwa nke ụlọ nyocha ọ bụla. Sistemu dị nwere ikike dị iche iche na ntinye aka ma jiri ya mee nyocha bụ isi site na nchọpụta ọgwụ na mmepe nchọpụta.
Ọzọ na: Covid-19 | Pennsylvania